आयोदधौम्य निर्मलमणि अधिकारीकृत उपन्यास “शहरमा …” को प्रारंभिक अंश | Nirmala Mani Adhikary (Ayod Dhaumya)
« संचार जीवनपद्धति
निर्मलमणि अधिकारी (आयोदधौम्य) को उपन्यास अन्तिम बादशाह »
आयोदधौम्य निर्मलमणि अधिकारीकृत उपन्यास “शहरमा …” को प्रारंभिक अंश
धेरै समयको अन्तरालपछि तिम्रो निम्ति केही लेखूँ भनेर लागिपरेको छु । मलाई थाहा छैन मेरा भावनाहरु तिमीसम्म पुग्ने पनि हुन् कि हैनन् । यथार्थमा भन्ने हो भने तिमी कहाँ छौ केही जान्दिनँ म । तर कुन भावनाले हो कुन्नि म तिमीलाई केही लेख्दैछु । आफैलाई थाहा छैन अझै तिमीप्रति कति माया छ मनमा र कति गुनासाहरु ।
मलाई अझै याद छ धेरै वर्ष अगाडि तिम्रो र मेरो देखादेख भएको थियो । क्याम्पस पढाइको पहिलो दिन । त्यतिखेर सम्पूर्ण वातावरण मेरो लागि नौलो थियो र तिमीलाई पनि तुलनात्मक रुपले कमै भएतापनि नौलै लागेको थियो होला । त्यहाँ तिम्रा संगिनीहरु थिएनन् न त मेरा परिचितहरु नै थिए । तर पनि केही क्षणको बसाइमा एउटा समूहमा सामेल भएको थिएँ म । तिमी र सरुमा पनि भर्खर परिचयको क्रम चल्दो थियो क्यार अगाडि चालु रहेको पढाइ भन्दा पनि कानेखुसी र गुनगुनमा दुवैजना व्यस्त थियौ । शायद म अलि बढी नै उमंग र उत्साहयुक्त थिएँ कि सिकाइको बीचमा गुनगुनाइलाई पचाउन नसकेर पछाडि फर्की बोलेको थिएँ – “अब गफ सकिएन र ?”
अपरिचितले अप्रत्याशित तवरले रोकावट हालेपछि स्वाभाविकतया तिमी चूप भएकी थियौ र चूप लागेकी थिई सरु पनि ।
नजाने कुन भावनाले पढाइपछि म बोल्न चाहन्थें तिमीसँग । तिम्रै अनुहार हेरुँ-हेरुँ लागेकोमा आफैं चकित थिएँ म । शायद तिमीलाई मेरो कि्रयाकलापको अनुभव नभएको हुनुपर्छ किनकि तिमी व्यस्त थियौ सरुसँगको सोधपूछमा । कक्षाका जम्मा दुईजना केटीहरु वार्तालाप गर्दै थिए त के आश्चर्य । तिमीहरुकै कुराकानी सुनेर थाहा पाएँ कि म जस्तो आगन्तुक नभएर स्थानिय रहिछ्यौ तिमी ।
त्यो पहिलो दिन क्याम्पसको त्यसै बित्यो । क्याम्पस देखि कोठासम्मको बीस मिनेट िहंडाइमा सोचाइ फगत् तिमी थियौ । तर सत्ते नामै थाहा थिएन मलाई । सोच्न लागेको थिएँ तिम्रो लागि कुन नाम उपयुक्त होला भनेर । मेरो भावना कसैको बारेमा छताछुल्ल भएर बग्दै थियो ।
भोलीपल्ट पनि क्याम्पस चाँडै नै जाने पुनरावृत्ति भयो । शुरुवातको उमङ्गले हो वा केले हो तिमी लगायत अन्य पनि धेरै अगाडि आएको अझै बिसे्रकी छैनौ वा बिसर्ियौ केही थाहा छैन मलाई । जे होस् दोस्रो दिनमा औपचारिक परिचय गरेका थियौं हामीले । जस्तोकि मेरो आकांक्षा थियो सरहरु अनुपस्थित भएर पढाइ सुचारु रुपले चलिरहेको थिएन । मैले प्रशस्त समय पाइरहेको थिएँ तिमी र सरुसँग विविध सवाल-जवाफ गर्न । प्रष्टै याद गर्न सक्छु म आफ्नो प्राप्ताङ्क तिमी र सरुले झैं मैले पनि ढाँटेको थिएँ । पछि सत्यता थाहा भएपछि खुब हाँसेका थियौं हामी दुई । हैन त ?
तिमी मेरो कमजोरी पो बनिदियौ । आँखाको परेला अगाडि त बास बस्यौ नै सपनीमा समेत दुःख दिन्छ्यौ भन्ने पटक्कै सोचेको थिइनँ । म वरिपरिको वातावरण सुनसान हुन्थ्यो तर मेरो मनमा तर्क-वितर्कले रोटेपिङ खेलिरहेका हुन्थे । भोलीपल्टै चाहतहरु छरपस्ट्याउने अठोटका साथ क्याम्पसतिर हान्निएको हुन्थें म तर तिम्रो सामुन्ने केही पनि खुलासा गर्न सक्दिनथें सिवाय अर्थहीन कुराहरु । हो केही दिन पछि नै एक आपसमा घनिष्ठता नटुसाएको भने हैन ।
हाम्रो घनिष्टतालाई उर्जा प्रदान गरेको थियो सरुको पलायनले । घरमा आमा बिरामी पर्नाले भर्खरै शुरु भएको पढाइ चटक्क छाडेर उनी अल्पिएपछि तिम्रो उठबस थोरै भएपनि पूर्व-परिचितको नाताले मसँग नै हुनु स्वाभाविकै थियो । म पनि चाहन्थें कि अधिक् क्षण तिमीसँग बिताऊँ । प्रष्ट रुपले आफ्ना भावना व्यक्त्याउन नसकेपछि कुण्ठित हुँदै तिम्रो आँखामा नियालिरहन्थें म । धेरै भावहरु हुँदा-हुँदै पनि भावहीन लाग्थे मलाई तिम्रा आँखाहरु । रोमािाचत हुँदै स्वर्गिय अनुभूति गर्थें म ।
यस्तै हो हाम्रो चलन युवक र युवतीको घनिष्टताको अर्को व्याख्या हामीले जानेका छैनौं जस्तो छ । त्यसैले त उनीहरु हाम्रो छलफल-गफगाफलाई सहजै नपचाएर शङ्काले पल्याकपुलुक गर्थे । गल्ती मेरो पक्कै छ प्रारम्भमा कििाचत् प्रतिवाद गरे पनि शायद मनमा आनन्द लाग्ने भएर हो कि तिनीहरुका एकान्तका परिभाषाहरु सुनेर चूपै रहने आदत परेको थियो मलाई । कालान्तरमा दुई-चारओटा मन्दिरमा हामी सँगै गएको देख्नेहरुलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसक्दा र गोडा चार पाँचेक् सिनेमाहरु सँगै हेरेको उनीहरुले थाहा पाए पछि त … । भो छाड्द्यौ यति तल पुगेर अड्कल काट्थे ती बदमासहरुले कि म अझैपनि लाजले पानी पानी हुन्छु ।
………………………… (यो उपन्यासका बाँकी विवरण पछि दिइनेछ ।)
This entry was posted on October 13, 2009 at 9:54 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “आयोदधौम्य निर्मलमणि अधिकारीकृत उपन्यास “शहरमा …” को प्रारंभिक अंश”
September 30, 2010 at 4:34 am | Reply
सर निकै राम्रो छ |लेख्दै जानु होला राम्रो कृति बन्न सक्छ |शुब कामना छ